Gudiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo dalbaday in la kordhiyo miisaaniyada wasaarada Gaanshaandhiga. – The Voice of Northeastern Kenya
Gudiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya oo dalbaday in la kordhiyo miisaaniyada wasaarada Gaanshaandhiga.
kadib markii wasiirka wasaarada Difaaca Soomaaliya,taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed, xubno ka tirsan gudiga difaaca Baarlamaanka iyo saraakiil kale ay shalay kormeereen xarunta tababarada ciidamada xooga dalka Soomaaliya ee Gen dhaga badan ayaay sheegeen inay lagama maarmaan tahay sare u qaadida tayada ciidamada Dowlada Soomaaliya si ay u suuragasho inay amaanka dalka wax ka qabtaan.
Saraakiishaan oo booqasho iyo u kuurgalid ku tagay xerada Gen dhaga badan oo saraakiil ka socota midowga Yurub ay ciidamada milatariga Soomaaliya ku tababaraan ayaa waxay warbixin ka dhagaysteen saraakiisha tababarada bixiya sidoo kale waxay indha indheeyeen qaybaha xerada iyo agabyada ay ciidamadu isticmaalaan.
Xoghayaha guddiga difaac ee golaha shacabka Soomaaliya, xildhibaan Sadiiq Warfaa, ayaa sheegay in miisaaniyadda wasaaradda Gaashaandhigga la kordhin doono sanadka soo socda maadaama uu dalka dagaal ku jiro.
wasiirka wasaarada difaaca Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed ayaa sheegay in dhismaha ciidanka xoogga dalka ay ka go’an tahay madaxda dowladda Soomaaliya, islamarkaana uu u taagan yahay fulinta hadafkaas dardargelinta howlaha dib loogu dhisayo ciidanka xoogga dalka oo ay wadaan dowladaha Midowga Yurub.
Wasiirka Gaashandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) ayaa sheegay inay ku dadaalayaan helitaanka xuquuqda ciidanka Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in loo diyaar garoobo sidii Shabaab dalka looga xoreyn lahaa.
Dowlada Soomaaliya waxay dagaal adag kula jirtaa islaamiyiinta diidan dowlada Soomaaliya iyo Ciidamada midowga Africa waxaana sidoo kale dowlada Soomaaliya ay dalal badan oo caalamka ka mid ah ay ka heshaa taageero lagu kobcinayo dhismaha ciidamada Soomaaliya.
← Ra’iisul wasaaraha Japan oo booqday gobolka ay fatahaadaha ay saameeyeen
Ciidamada xasilinta Soomaaliya oo eedaymo loo soo jeediyay. →